किन भगवान शिवलाई अनेक नामले पुकारिन्छ ? – Naya Kura Daily
किन भगवान शिवलाई अनेक नामले पुकारिन्छ ?
July 20, 2020 234
साउन, अर्थात भगवान शिवको आराधना गर्ने महिना । साउनको सोमबार अरु विशेष मानिन्छ । त्यसो त शिवको अनेक रुप छन् । अनेक नाम छन् । शंकर, भोलेनाथ, महादेव, आदिनाथ । यस्ता थुप्रै नामले भगवान शिवलाई पुकारिन्छ । भगवान शिवको स्वरुप जति अर्थपूर्ण छ, उनको नाम उत्तिकै रहस्यमयी पनि । अतः यहाँ भगवान शिवको ३५ रहस्य उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वप्रथम शिवले नै धर्तीमा जीव्नको प्रचार–प्रसार गरिएको मानिन्छ । त्यसैले उनलाई ‘आदिदेव’ भनिएको हो । आदिको अर्थ प्रारम्भ । आदिनाथ हुनुको कारण उनको एक नाम आदिश पनि हो ।
जसरी जय र विजय विष्णुको पार्षद हुन् । उसैगरी बाण, रावण, चन्ड, नन्दी, भृंगी आदि शिवको पार्षद हुन् ।
सबै धर्मको केन्द्र शिव
देवता र असुर दुबैको प्रिय शिव
वनवासीदेखि लिएर सबै साधरण व्यक्तिले जुन चिन्हको पूजा गरिन्छ, ति पत्थरको ढोल, बटिया शिवको चिन्ह मानिन्छ । यसका साथै रुद्राक्ष, त्रिसुललाई पनि शिवको चिन्ह मानिनछ । कसैले डमरु र अद्र्ध चन्द्रलाई शिवको चिन्ह मान्छन् । अहिले धेरैजसोले शिवलिंग अर्थात शिवको ज्योति पूजा गर्छन् ।
त्यसलाई कम्मरमुनी बाँध्नुको अर्थ हिंसालाई दबाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै, शिवजीको आकृतिमा समानन्तर तीन वटा आँखा हुन्छ । बीचको तेस्रो आँखालाई अलौकिक सृष्टिको प्रतिक मानिन्छ । त्रिसुलको तीनवटा शूलले उदय, संरक्षण र विनासको संकेत गर्छ । सर्पले पर्यवरणमा रहेको विषाक्त पदार्थलाई आफ्नो गलामा समाहित गर्छ । शिवजीले सर्पको माला लगाउनुको अर्थ पनि पर्यावरणको शुद्धतासँग जोडिएको छ ।
Prevजेलमा हुँदा लिएकाे एक हजार सापटी फिर्ता नगर्दा हत्या !
Nextअपहरणपछि युवकको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
कोरोनाबाट ९ जनाको मृत्यु, ९८० जनामा संक्रमण पुष्टि
सार्वजनिक यातायातमा भीड, जनस्वास्थ्यविद भन्छन्–सचेत रहौं
सेनाको कुटाइबाट मृत्यु भएका राजकुमारको शव पोस्टमार्टम गर्न काठमाडौं पठाइयो
५ सय भाडा लाग्ने ठाउँमा हजारौँ भाडा लिएर यसरी मनपरी ब्रमलुट गर्दैछन् यातायात ब्यबसायी, नेपालमा सबै लुट्न मात्रै जन्मेका हुन् ?